Ngaba Umele Uhlanganisane Nabanye Ukuze Unqule UThixo? | Ithini IBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArmenia IsiBhulu IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
UKUBA uye waphoxwa yicawa okanye uvakalelwa kukuba ayibalulekanga nganto kuwe, yazi ukuba baninzi abavakalelwa njengawe. Eneneni, liyanda inani labantu abangafuni kubizwa ngecawa.
Abanye baye bazishiya iicawa kuba besithi zizaliswe luhanahaniso nokunganyamezelani. Kwabanye kunzima ukuthobela imiyalelo yazo. Kukho nabavakalelwa ukuba icawa asiyomfuneko ukuze banqule uThixo. Yintoni efundiswa yiBhayibhile ngokuhlanganisana nabanye?
Abahlobo BakaThixo Mandulo
IBhayibhile iyichaza kakuhle indlela ababenqula ngayo mandulo oosolusapho, uAbraham, uIsake, noYakobi. Ngokomzekelo, ngesinye isihlandlo uThixo wathi: “Ndiye ndaqhelana naye [uAbraham] ukuze yena ayalele oonyana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukuze bagcine indlela kaYehova benze ngokobulungisa nangokwemigwebo yakhe.” (Genesis 18:19) UAbraham wayengumhlobo kaThixo kwaye enolwalamano olusenyongweni noMdali. Kodwa wayemnqula kunye nendlu yakhe. Ngokufanayo,nabanye oosolusapho ababengabahlobo bakaThixo babemnqula beliqela, ngokuqhelekileyo amalungu eentsapho nezalamane kuquka izicaka zabo.
Ethubeni, uThixo wayalela amaSirayeli amandulo, ibe kamva wayalela amaKristu enkulungwane yokuqala, ukuba ahlanganisane ukuze anqule. (Levitikus 23:2, 4; Hebhere 10:24, 25) Ezo zihlandlo zokuhlanganisana ukuze kunqulwe zaziquka ukucula, ukufunda iZibhalo, nokuthandaza. (Nehemiya 8:1-8; Kolose 3:16) IZibhalo ziphinda zisichazele ukuba kumele kubekho iqela lamadoda afanelekayo akhokela ibandla xa kunqulwa.—1 Timoti 3:1-10.
Iingenelo Zokunqula Njengebandla
Ngokusuka kwezi Zibhalo, kuyacaca ukuba nanamhlanje uThixo ulindele ukuba abahlobo bakhe bahlanganisane ebandleni ukuze bamnqule. Zininzi iingenelo zokunqula uThixo njengebandla.
Ngokomzekelo, iZibhalo zifanisa umnquli wokwenene nomntu ohamba kwindlela emxinwa, okanye imbaleki eselugqatsweni. (Mateyu 7:14; 1 Korinte 9:24-27) Xa ibaleka umgama omde, kwindlela embi kunokuba lula ukuba imbaleki ityhafe ize inikezele. Kodwa, imbaleki inokuxhathisa xa kukho abanye abayikhuthazayo. Naye ke, umntu ozimisele ukunqula uThixo unokulugcina ulwalamano analo noThixo phezu kwazo nje iinkxwaleko xa ekhuthazwa ngabazalwana bakhe.
Oku kuwachaza kakuhle amazwi akumaHebhere 10:24, 25, apho iBhayibhile ithi: “Masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye.” Eneneni, iZibhalo zibonisa ukuba abanquli bokwenene babeya kunqula kunye njengabazalwana noodade, bemanyene kanye njengomzimba.
Ngaba umele ungafuni kuva kwanto ngokuhlanganisana ukuze unqule nabanye abantu?
IBhayibhile isichazela ukuba lo mzimba, okanye ibandla, umanyaniswe luthando noxolo. Ngokomzekelo, eyabase-Efese 4:2, 3 ibongoza abanquli bokwenyaniso ukuba benze izinto ‘ngokuthobeka okupheleleyo kwengqondo nobulali, benokuzeka kade umsindo, banyamezelane ngothando, bekuzabalazela ngokunyamekileyo ukugcina ubunye bomoya kumxokelelwane omanyanisayo woxolo.’ Umntu ebeya kukwazi njani ukuthobela esi siluleko xa enqula yedwa ngaphandle kwabanye?
Kukuthanda kukaThixo ukuba abanquli bokwenyaniso bahlanganisane ukuze bamnqule kunye kunokuba bazimele geqe ngabanye. IBhayibhile ibongoza abanquli ukuba bathethe ngokuvumelanayo, ukuze baphephe iyantlukwano, kwaye ‘bamanyane engqondweni enye nasengcamangweni enye.’ (1 Korinte 1:10) Loo mazwi ebengayi kuba nantsingiselo ukuba uThixo ebefuna abantu bamnqule ngabanye kwindawo zabo.
Kucacile ukuba, iBhayibhile ibonisa ukuba indlela eyamkelekileyo yokunqula uThixo kukuba abazalwana bamanye elunqulweni. Olo nqulo luchazwa ziZibhalo, loo ndlela uThixo afuna simnqule ngayo, lunokukomeleza uze ukwazi ukwanelisa intswelo yakho yokomoya.—Mateyu 5:3.
Yinyaniso ukuba, iicawa ezininzi namhlanje zizaliswe luhanahaniso nezenzo zenkohlakalo ezingathethekiyo. Kodwa ke, oko akuthethi kuthi umele ungafuni kuva kwanto ngokuhlanganisana ukuze unqule nabanye abantu. Emhlabeni kumele kubekho unqulo olulungelelanisiweyo ukuze lubonise uthando kubantu bonke—unqulo olulungelelaniswe ukuze lufundise abanye ngemilinganiselo kaThixo yokuziphatha. Olo nqulo lunokukunceda ube nokholo lokwenene. IBhayibhile inezinto ezinokukunceda ukwazi ukubona olo nqulo alwamkelayo uThixo.
Ngaba iBhayibhile inawo umzekelo wonqulo lwabazalwana abamanyeneyo?—Levitikus 23:2, 4.
Yintoni ebalulekileyo ngokunqula uThixo kunye njengebandla?—Hebhere 10:24, 25.
Yintoni emanyanisa abantu ukuze banqule?—Efese 4:2, 3.
IBhayibhile isichazela isizathu sokuba kukho iicawa ezinzi.